Sao Tome-Sy-Principe : Fitroarana Tao Amin’ny Hopitaly · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Sara Moreira Nandika (en) i Sara Moreira, Abdoulaye Bah, nirinandrea
Voadika ny 26 Jolay 2018 8:14 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Português
Ny Hopitaly Ayres de Menezes, faritra voatokana ho an'ny fitsaboana zaza, Blaogy Joãozinho Leve Leve
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aogositra 2010)
[Rohy amin'ny fiteny paortigey] Nandritry ny volana maromaro lasa izay, lohahevitra mafana iray no naresaka tao amin'ny tontolon'ny blaogy tao Sao Tome sy Principe mikasika ny olana eo amin'ny fahasalamam-bahoaka -izay voalaza fa efa nahitam-bahaolana. Hatramin'ny herinandro lasa teo, tsy nisy rano ny fantson-drano tao amin'ny hopitalin'i Ayres de Menezes, kanefa nanome toky ilay tale hoe efa noraisiny an-tànana ilay olana.
Efa tamin'ny fiandohan'ny taona 2010 no niresaka io olana goavana momba ny rano ao amin'ny hopitaly lehibe ao Sao Tome io ireo blaogera. Naharitra dimy taona io olana ara-pamatsiana io. Ny volana Febroary, Ricardo Bianchi, paortigey iray mpitsabo miasa mamita iraka ao amin'io hopitaly io no nandefa lahatsoratra iray tao amin'ilay blaogy Joãozinho Leve-leve momba ny toetoetry ny seha-pitsaboana ao Sao Tome, indrindra indrindra ny fepetra iasan'ireo mpiasan'ny fahasalamana isanandro.
Araka ny fijeriny, ny tsy fahampian-drano no isan'ny sakana iray lehibe, ary manahy izy fa aminà tranga sasantsasany, mety tsy ho voasakana ny hisiana fahafatesana tampoka noho ny tsy fahampiana fitaovana, hoy izy manazava :
.Hitantsika eny rehetra eny ny takelaka maro maneho tetikasa, kanefa miha sarotra ny fampiasana ireo fitaovana ara-teknolojika misy ao an-toerana raha toa ka tapaka matetika ny herinaratra ary tsy misy rano ao amin'ny hopitaly. Vokany : lalantsara feno hipoka sady tsy ampy rivotra, miaraka amin'ireo olana maro isan-karazany ao amin'ny efitrano fitaràfana. Tranga hafa iray mihitsy ho anay zatra ny sekoly fianarana ho mpitsabo sy ny hopitaly any amin'ny firenenay [Paortiogaly]!
Telo volana aty aoriana, Américo, dokotera iray hafa nandray ny toerany tamin'ilay iraka nataony koa no nanoritsoritra ny tsapany voalohany tao amin'io blaogy io ihany :
Mibaribary daholo ny hakelin'ny toerana, ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa ary toa tsy mahagaga ireo mpiasan'ny fahasalamana miasa ao isanandro izany, amin'ny fanaovana izay mety araka izay fitaovana misy eo am-pelatanana. Olana lehibe indrindra angamba ny tsy fahampian-drano ao amin'ny hopitaly, izay vao mainka manasarotra ny fahadiovan'ireo marary sy ny mpiasa ao ary manisy fetra henjana ny fampiasana ireo fitaovam-pitsirihana misy ao.
Fitanisàna ny rafitra famatsian-drano tao amin'ny gazetiboky “Ilustração Portugueza”, Desambra 1916, Blaogy Revista Antiga Portuguesa
Kihon-dalana hafa mihitsy no nalehan'ilay resaka ny volana May, rehefa nanao antso iray i Humbah Aguiar, izay mpila ravinahitra avy ao Sao Tome, tanaty lahatsary tao amin'ny Youtube mitondra ny lohateny hoe : Ao amin'ny Hopitalin'i STP, mangalatra ny ranon'ny hopitaly ny mpanankarena ary mijery fotsiny ny olona !!!!!?? :
Tsy manan-drano ny hopitaliben'i São Tomé satria avilin'ireo mpanankarena ho any an-tranony izany.
Mihetseha ianareo ry mponina ao Sao Tome, manaova hetsika eny an-dalambe…
Avy amiko irery ihany izao fitroarana izao, izaho irery ihany no manameloka…
Ao amin'ilay lahatsary, i Humbah Aguiar no maneho ny fitroarany taorian'ny namakiany fanadihadiana iray mombanà zaza namoy ny ainy noho ny tsy fahampian-drano tao amin'ny hopitalin'i Ayres de Menezes, na dia ny hihinanana fanafody fotsiny aza. Mampahatsiahy fitoriana iray teo aloha ilay lahatsoratra, mikasika familiana ny lalan-dranon'ny hopitaly nataonà faritra raitra iray naorina akaiky eo, ny Campo de Milho :
Hetaheta sy loto ao amin'ny hopitaly lehibe, kanefa 200 metatra miala eo, miraradraraka ny rano manala hetaheta ireo mpitarika antoko politika sy ireo mpandraharaha monina ao Campo de Milho.”Manana rano ho sotroina sy hanondrahana zaridaina ry zareo” hoy ny voalazan'ilay marary iray tao amin'ny trano fandraisana vonjy taitra.
Ny rano mamatsy ireo faritra raitra ao Campo de Milho dia natokana manokana ho an'ny hopitaly . Ireo manankatao monina ao amin'io faritra voatokana akaikin'ny hopitaly io no nijirika ny fantson-drano ary namily izany ho an'ny tranon'izy ireo, ho an'ny tombotsoa manokany sy ny fahafinaretany.
Nahatonga resabe ilay lahatsary ary haingana be koa ny fiparitahany tany amin'ny vondrona hafa anaty aterineto, toy ny São Tomé Blog, Facebook sy Canal Santola. Dimy ambinifolo andro taty aoriana, nojerena in-1500 isa ilay lahatsary ary nihamaro ny fanehoankevitr'ireo mpampiasa aterineto teny amin'ny sehatra isan-karazany teny. Ilay vohikala Téla Nón moa dia namoaka lahatsoratra nanambaran'ny mpitantana ilay hopitaly fa efa voavaha ny 80/90 isan-jaton'ny olana tamin'ilay fotodrafitrasa. Voalaza fa mampiasa fantson-drano avy aminà trano tsy misy mipetraka intsony eo amin'ny manodidina eo ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Andro vitsy taty aoriana, voamarina fa diso izany fanambarana izany :
Mbola tsy misy rano foana ao amin'ny hopitaly lehiben'i Ayres de Menezes. Tahaka ny tamin'ny volana maro lasa, mbola ny mpamono afo ihany no natao hiandraikitra ny famatsiana rano io tombim-pahasalamana malaza io.
Ny fanambarana toy izany no namerina indray ireo resabe tanaty aterneto, fa taminà fomba fijery hafa : ny kalitaon'ny rano vokarin'ireo mpamonjy haintrano. Naneho ny ahiahiny ny Minisitry ny fahasalamana ao Sao Tome-sy-Principe, Arlindo Carvalho ny amin'ny mety hisian'ny trangana hamehana noho ny fanapoizinana ao amin'ny hopitaly, eo anoloan'ny fahasahiranan'ireo marary hanatanteraka ny zavatra kely indrindra ilainy, toy ny fidiovan'ny tena. Am-polony ireo fanehoankevitra nanaraka izany. Ny 13 Aogositra, nanao fanambaràna ny talen'ny hopitaly Ayres de Menezes, José Luis, fa “mandeha moramora ny rano mivoaka avy ao amin'ny fantson-dranon'ny hopitaly”, ary tsy fantatra akory ny fomba nahitam-bahaolana tamin'ilay izy, na ny vokany ho an'ireo tomponandraikitra tamin'ny fanodikodinana ny rano ho any amin'ny tanànan'i Campo de Milho.
Nohamarinin'i Janet Gunter ity lahatsoratra ity.